गरिबीले श्रीमान खो’स्यो ,पापीले छोरीको प्रा’ण लियो, अब म कसको मुख हेरेर बाच्नु ? - Nepal Aawaaj
शुक्रबार भा’गर’थी भट्टको अ’न्तिम सं’स्कार गरेर घर फर्किनु भएका केशवलाई आमा स’माल्न गाह्रो भईरहेको छ । आमा द्रो’पति छोरीले बारीमा लगाएको तोरी फूलेको देखेर छिन छिनमा भ’क्कानिएर रुनुहुन्छ । भा’गर’थीको याद आउने घरका सबै वस्तु ह’टाए पनि बारीमा फूलेको तोरी कहाँ लगेर राख्नु ? भा’गर’थीका दाजु केशवले भन्नुभयो । “फूलेको तोरी टिप्न नपाउँदै आफै ओ’ईलिएर गई,” केशवले भन्नुभयो,“ घर खर्च चलाउन बाख्रा पनि पालेकी थिएन्, वस्तुभाउ उसैको जिम्मा थिए ।” ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
च’डेपानी गाउँबाट डेढ घण्टाको सडक दूरीमा पर्ने बैतडी अस्पतालको श’वगृ’हबाट भा’गर’थीको श’व नि’कालेर भागरथीका दाइ केशवले महाकालीमा अ’न्त्यष्टि गर्न जाँदा छोरीको अ’नुहार अ’न्तिम पटक हे’र्ने चाहना थियो तर, आमा द्रो’पतिलाई आ’फन्तले हेर्न जान दिएनन् ।श्रीमानको मृ’त्युपछि सेतो पहिरनमा रहनु भएकी द्रो’पतिलाई छिमेकी र नजिकका ना’तेदार रातदिन सम्’झाउन घरमा आईरहनुहुन्छ तर, एकपछि अर्को ब’ज्रपातले द्रो’पति ए’कोहोरो टो’लाएर रोईरहनुहुन्छ । घरमा कहाँबाट को आउँदैछन् ? केही थाहा छैन । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
अ’रोपित दिनेश भट्टले फागुन ६ बिहीबार आफ्नै घरपरिवारका स’दस्य मध्येका बुवा, सरकारी व’किल र अनुसन्धानमा स’रिक प्रहरी अधिकृतका सा’मु ब’ला’त्का’रपछि आफूलेनै ह’त्या गरेको स्वी’कारगरेपछि भा’गर’थीको श’व बु’झेर महाकाली नदी किनारमा अ’न्त्येष्टि गरिएको आ’फन्त शिवराज भट्टले बताउनुभयो ।विहीबार अ’भियुक्त दिनेश भट्टको ब’यानका आधारमा ल’डाकेल जङ्गलबाट भा’गरथीले प्रयोग गर्ने गरेको घ’डी फे’लापरेपछि घ’टनाको विस्तृत अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
छोरिले चिकित्सक लाईसेन्सको परिक्षामा पास गरेपछि आमाले खुशी हुदै दिएको बधाई।
प्रिज्मासँगको प्रेम स्विकार्न सागरलाई सकस
भागीरथीले पालेका बाख्रा हेर्दै भक्कानो छोड्दै रुन्छिन् आमा